Robot any an-dakozia - iza amin'ireo no tokony hofidiko, maodely ary tombony? | Bezzia
Susana godoy | 09/06/2021 16:00 | lakozia
Iray amin'ireo fanontaniana azontsika atao ny manontany tena indrindra ary misy izy io ary maro karazana robot any an-dakozia izay ananantsika eny an-tsena. Noho izany, indraindray dia somary sarotra amintsika ny misafidy iray. Tsy fantatray izay tokony hojerentsika alohan'ny handraisana azy io, ka anio dia hanampy anao izahay.
Hanome anao ny torohevitra tsara indrindra izahay ary koa ny fampahalalana marina tsara ka ny safidinao no tsara indrindra arak'izay ilainao. Satria tsy mitovy daholo isika rehetra, fa te hividy tsara sy maharitra. Ka eo an-tanana tsara indrindra ianao ary izao dia hasehonay anao.
1 Inona no robot tsara indrindra amin'ny fandrahoana sakafo
2 Inona ilay robot lakozia amidy indrindra
3 Inona avy ireo tombony azo amin'ny robot an-dakozia
Inona no robot tsara indrindra amin'ny fandrahoana sakafo
Raha tsy misy isalasalana dia misy marika maro sy maodely marobe anananao eny an-tsena. Fa amin'ireo rehetra ireo dia tokony hieritreritra andian-dingana foana ianao alohan'ny hividianana azy ireo. Satria marina fa manana tombony lehibe izy ireo saingy tsy maintsy ampifanarahana amin'ny fiainantsika ireo.
Ny fahafahan'ny masinina ao an-dakozantsika dia iray amin'ireo teboka lehibe. Satria hanombatombana izany araka ny fisakafoananay izahay. Raha olona efatra ianao matetika no misakafo dia tsy hitovy ao an-trano izany hoe roa na angamba iray ihany no velona. Ka manana maodely roa litatra ianao ary koa 5 litatra.
Ny fahefana dia iray amin'ireo hevi-dehibe. Satria ny hery bebe kokoa dia mitovy hevitra amin'ny tanjaka bebe kokoa ary haharitra ela kokoa izy io ary misy valiny tsara kokoa. Ny sasany manana herinaratra 500W, ny hafa kosa mihoatra ny 1000W lavitra.
Ny fiasa ananany dia hevitra iray hafa hijerena. SATRIA ny sasany manana fiasana hatramin'ny 12 ary ny hafa mihoatra ny 8. Ny zavatra tsara dia ny fahalalana hoe iza no entiny ary mieritreritra raha miaraka amin'izy ireo izany arakaraka ny lovia omaninao matetika. Ny maodely fototra indrindra dia efa manana ny asany lehibe sy ilaina.
Arakaraka ny maha-fatra azy ireo no manana ny kojakoja fanampiny homena hanamorana azy ireo.
Tokony ho azonao antoka fa mora diovina ireo singa sy kojakoja na afaka mandeha any amin'ny mpanasa vilia izy ireo., mitsitsy fotoana foana.
Inona ilay robot lakozia amidy indrindra
Raha manontany tena ianao hoe iza no robot lakozia tsara indrindra, tsy afaka mamaly anao amin'ny iray fotsiny izahay satria misy fomba maromaro manondro izany. Saingy misy ny sasany izay nametraka ny tenany ho robot be mpividy indrindra ao Amazon.
Ny toerana voalohany dia mankany amin'ny robot Cecotec Mambo Manana lahasa 30 izy, 3,3 litatra ny fahaizany, ary koa ny boky fanamboarana ary azo antoka ny fanasana vilia. Raha mila mpanampy tsara ianao dia aza misalasala mividy azy eto.
Mazava ho azy raha mbola te-hihary vola kely ianao fa manana safidy tsara eo anilanao, misy ity maodely ity izay hitanao eto ary ity iray hafa amidy ity eto mitovy Ny voalohany misy 900W sy ireo fiasa ilaina indrindra, raha ny faharoa kosa manana menus efa-8 namboarina ary 5 litatra ny fahaizany.
La marika Moulinex Izy io dia manana modely robots an-dakozia maromaro izay nametraka ny tenany ho isan'ireo mpivarotra tsara indrindra. Ny iray amin'izy ireo dia ilay manana 3,6 litatra fahafaha-manao, ary koa boky fanamboarana sy programa mandeha ho azy 5 izay hitanay eto.
Inona avy ireo tombony azo amin'ny robot an-dakozia
Efa hitantsika izay tokony hojerentsika rehefa mividy azy, ary koa ny maodely amidy sasany. Fantatra izany rehetra izany, dia mitoetra ihany ny mifantoka amin'ny tombony.
Mitsitsy fotoana any an-dakozia izy ireo, satria azo ovaina izy ireo ary hanao ny asa rehetra nefa tsy mila miandry akory isika.
Samy voafehy ny maripana sy ny fotoana izay mitovy amin'ny vokatra tsara kokoa.
Manana boky momba ny fomba fahandro izy ireo izay manampy anay amin'ny fanomanana lovia amin'ny fomba samihafa.
Vantany vao vita, tsy hanana be dia be ny diovina ary ny lakozia dia ho tonga lafatra mandrakariva.
Mahery izy ireo ary mihamaro hatrany ny endriny mifangaro ka tsy maka toerana be loatra izy ireo.
Azo antoka fa aorian'izany rehetra izany dia homenao azy ireo ny fampiroboroboana azy io isan'andro. Ny milina lakozia dia hanampy anao amin'ny fotoana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » lakozia » Robot any an-dakozia, iza no tokony hofidiko?
Massimo Dutti dia manolotra ny trano fanontana vaovao SS21: New Edgy
Ahoana ny famonoana otrikaina amin'ny famonoana ny foitra